प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापालाई खुल्ला पत्र। – SaipalNews.com
आदरणीय क. सुर्यबहादुर थापा क्षेत्री
बालुवाटार, काठमाडौ, नेपाल अभिवादन,
म यहाँ आराम छु । तपाईं आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने बिश्वास गर्दछु। कामरेड म तपाईको एक सुभचिन्तक तथा कार्यकर्ताका नाताले हजुरलाई मेरो मनमा उब्जिएका केही जिज्ञासाहरु राख्ने कोसिस गर्दैछु। मैले मेरा जिज्ञासाहरु राख्दै गर्दा तपाईको मनमा बिझाउन सक्छ, त्यो बिझएकै भरमा मलाई के के थरी पापा’राजी/ सापा’राजी बनाउनु हुने छैन भन्ने बिश्वास त राखेकै छु तर तपाईको आजकालका कृयाकलापहरु देख्दा डरै पनि लाग्नु स्वभाबिक हुन्छ । कामरेड म यो पत्र तपाईलाई लेख्न किन हक राख्छु भन्ने होला ? किनभने म तपाईलाई ५ बर्षदेखि नजिकबाट चिन्छु तर नेताहरुले मलाई नचिनुन भन्ने चाहान्छु त्यसैले तपाईले नचिन्न पनि सक्नु हुन्छ । तर, जतिबेला तपाईं पार्टीको पर्यटन बिभागको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला तपाईले आयोजना गरेका दुई ओटा कार्यक्रमहरुमा तपाईलाई ५०/६० जना समेत जम्मा गर्न मुस्किल भएको बेला केही तपाईका नजिककाहरुले कार्यक्रममा साथिहरु ल्याउनु पर्यो भन्दा मैले पनि किर्तिपुरबाट भाडा तिरेर दुई/तीन चोटी तपाईकै कार्यक्रमकोलागि भन्दै १०/१५ जना साथिहरु लिएर आएको छु । त्यसैले पनि म तपाईलाई मेरो क्षेत्र बिनाको काममा सहयोग गर्ने एक सहयोगिको नाताले र एक कार्यकर्ताको नाताले केही न केही त भन्ने हक राख्छु नै ।
कामरेड, तपाई डेरा सरेर बालुवाटार पुगेको धेरै समय त भैसकेको छैन । तर पनि धेरै नेता, कार्यकर्ता, पार्टिका शुभचिन्तक र सामाजिक संजालमा आबद्ध जनतालाई बर्षौ बिते जस्तै आभास भएको देखिन्छ। कामरेड, नलागोस पनि किन ? तपाई डेरा सरेर बालुवाटार आउनु भो, बालुवाटारको कतै कुनामा भएपनी स्थान राख्ने धेरै बहादुर नेता कार्यकर्ताहरुको आगमनमा बन्देज भो । हुन त तपाईलाई केही मान्छेहरुको खेदो खन्नकैलागि बालुवाटार प्रबे़श गराईएको हो बुख्याचाकारूपमा । तपाईं त पात्र हो प्रवृत्ति अर्कै हो। हिजोका मुखिया अचेल गुमनाम छन, सायद बुझेछन होल । अहिले तपाईंले पनि “नौली गाईका नौ पुला घास” गर्नै पर्छ । नगरे बिहान बेलुकाको रोटि रोजि पनि चलाउन धौ धौ नै हुन्छ होला। बिस्तारै पेट भरिन्छ र हजमोला खाँदै , डकारमार्दै , ठाउँ ठाउँ चाहर्दै पछि पछुताउने समय त छदै छ।
कामरेड, तपाईं आउनु भएपछी नै बर्सौ पछि जोडिएको भैसेपाटी र बालकोटको सम्बन्ध फेरि बिच्चेद भएको छ भनिन्छ। नहोस नि किन ? तपाईले २०७४ सालमामा काठमाडौमा बसेर बर्दियाको बास्मती धान पाक्ने लागेको बेला घरमा पालेका चराहरु लगाएर बाली ‘नष्ट गरेको कुरा थाहा नपाउने को होला ? तपाईले बाली नष्ट गरिदिएकै उपहार आज बालुवाटारको डेरा पाउनु भएको भन्ने भसैपाटिको विश्लेषण स्पस्ट बुझिन्छ र धेरै चोटि पोखिएको नि देखिन्छ। हिजो अस्ति कहिले काहीँ भएपनी बालुवाटार झुल्किने भैसिपाटि आज उतै तिर भेला बोलाउने गरेको तपाईलाई राम्ररी नै थाहा छ।
अझै हिजो कुनै बेला तपाईले चारो खाएको डल्लु र बालकोटको सम्बन्ध पनि केही समय अगाढी प्रगाढ भएको ठानिन्थ्यो तर तपाईको प्रबेशले डल्लु दरबारलेपनि बालुवाटार भन्दा भैसेपाटी नजिक ठानेर उतै तिर चिया/कफी लिनेगरेको समाचारहरुमा प्रशस्त भेटिन्छ। कामरेड, न होस पनि किन ? हिजो तपाईले डल्लुको चारो खादै गर्दा छतमा सुकाउन राखेको बिस्कुन खाएको भन्ने आरोप ताजै छ।
छतको बिस्कुन खाईरहेको देखेर धपाउदा भुर्र उडेर टोखाको दलिनमा गुड बनाएको भन्ने कुरा सबै पुर्ब एमालेजनलाई अवगत नै छ। आफ्नो कमाई खाने खेती बर्दियामा भएको तर टोखाको खेतिमा मलजल गरेर हुर्काउन लागेको तर बर्दियामा असिनो बर्साएको भनेर तपाईलाई बर्दियाका ईमान्दार किसानहरुले अब आएर कुलो भाच्न खोजे तिर्खा मेटाउन भनेपनी एक घुट्को पानी नै नदिने कसम खएको कुरा मलाई भन्दा बढि तपाईलाइ जानकारी छ नभए बर्दिया जिन्दावाद छ। एकचोटी कुलो भाच्ने कोसिस गरेर हेर्दा भो।
साथै हिजो कोटेश्वरको छतमा बसेर बालकोटमा ढुङा बर्षाएको कुरा तपाईका शुभचिन्तकहरुलाई राम्रो सङ थाहा छ नभए एकचोटी सोधी हेर्नुस। हिजो कोटेश्वरका ढुङाले तपाईले नै भरेको बालकोटबाट आज तिनै ढुङ्गा जम्मा पारेर बालुवाटारको आडमा चारैतिर बर्षाई रहेको भन्ने कुरा बुझ्न अप्ठेरो छैन जति तपाईं समय समयमा भेष बदलिरहने गढिको छेपारो हो भनेर चिन्न अप्ठेरो छैन।
कामरेड, तपाईंको उर्बर भुमी देख्नै नसक्ने पुरानो बानी अझै नसुध्रेको स्पष्टै छ, त्यसैमा बालुवाटारको डेरा सराईले त झन अचेल तपाईले आफुलाई हात्ती र अरु सबैलाई कमिला ठान्न थाल्नु भएकोछ। त्यसैले आज सुदुरपस्चिमका फाटहरुमा झुलिरहेको बास्मती धानमा तपाईको आँखा लागेको छ र तपाईका घरबेटिले समेत जस्सरी भएपनी ति फाटहरुको बाली नष्ट गर्नु बरु अतिरिक्त समयको पनि चाहे बमोजिमको पारिश्रमिक लिनु भनेर तपाईलाई कबुलियत गरेर डेरा दिएको भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन जति तपाईले खुमलटारमा गुलेली हाने वापत यो बक्सिस प्राप्त गरेको भनेर बुझ्न अप्ठेरो छैन।
कामरेड, थापा, सुदुरपस्चिमका फाटहरुमा लहै लह फलेको बास्मती आज देशै भरी सबैले बीउ खोजी रहेका छ्न सुपले देशै भरिका किसानहरुलाई पुर्ण बिश्वासका साथ बिउ बाड्न लागेको हो। साथै त्यो बास्मती धानमा न त कुनै बिदेशी ब्राण्डको रासायनिक मल मिसाईएको छ न त किटनासक औषधी, छ त केवल घरेलु कम्पोष्ट मल। त्यसले पनि २०७० सालको भृकुटी मण्डपमा चेलेको ७ दिने धान मेलामा समेत सुपको बीउ सबै भन्दा बढी जनता तथा प्रतिनिधि किसानहरुको रोजाईमा भएको तपाईले समेत देख्नु भएकै हो। तपाईले पनि घर सल्लाह नगरेरै अलिकती त्यो बीउ ल्याएको निहुमा तपाईको घरका मुलिहरुको हप्काई खाएको अझै तपाईलाई सम्झना नै छ होला।
त्यही कुरालाई बुझेर त्यो बेलाको बालुवाटार र बालकोटले समेत २०७४ सालसम्म त्यही जातको धान रोपेको कुरा सर्वबिदितै छ। अनि अस्ति मात्र २०७४ साल तपाईले बर्दिया असिनो पारेको बर्ष सुदुरपस्चिममा पनि असिनो बर्साउनेहरु थुप्रै हुदा हुँदै पनि एक आना खेतको बिउमात्र खेर गएको कुरा मैले सम्झाई रहनु पर्दैन किनकी आज त्यस फाटबाट पनि उब्जनी गरेर ल्याएका कयौं बोरा बास्मतिको भातले बालुवाटारमा तपाई लगायतलाई पनि डकार छोडुन्जेल खान पुगेकोछ। तर अफसोच , २०७५ को नयाँ-नयाँ बिउहरुको छनोट तथा क्रसिङ गराउदा बिदेशी रासायनिक मलले एकछिन लटरम्मै फल्ला जस्तो देखिएका केही बिउहरुलाई किसानहरुले होइन बिउ उत्पादनको जिम्मा लिएर बसेका ठेकादारहरुले छनोट गरे। घरेलु बिउको महत्व त्यति बेला बिर्सिएका कारण आजकाल बास्मतिको संकट देखिएको हो।
त्यसैले, कामरेड किसानहरुको चाहाना अनुसारको बीउ लिएर उब्जाउने अधिकार पाउनुपर्छ साथै आज सुपको बिउ सबै भन्दा उत्तम छ भन्नेकुरा गाउघर, धारा पधेरा र देश बिदेशमा सरसल्लाह भएको देखेर तपाईले आँखा माड्नु, निन्याउरो मुख गर्नु, रिस गर्नु स्वास्थका हिसाबले पनि राम्रो हुन्न होला र गरेर हुने वाला केही छैन। बरु बर्दियाको बाली नष्ट गर्न लाग्दा आफ्नो नाउमा एक आना जग्गा समेत नभएको बेला फेरि अर्को उत्तम बिउमा पनि आँखा लगाउनु भयो भने देश भरिबाट तपाईको बिउ लोप गर्न किसानहरुले बाकी राख्ने छैनन। त्यसैले, समयलाई समयमै चिनियोस।
कामरेड, अहिले त यतिका यति मात्र सुन्ने, देख्ने र व्यबहार गर्ने बानी परिरहेका बेला यतिका हरफहरुलाई समेत तपाईहरुको तन, मन र धनको साथी यति जत्तिकै राम्रो मानेर पढ्ने कष्ट गरिदिनु होला। अब अर्को प्रसङ अलि स्पस्ट रुपमा लेख्ने कोसिस गर्दै छु।
कामरेड, तपाईं त पार्टिको सह-प्रबक्ता तथा प्रधानमन्त्रीको प्रेष सल्लाहकार हो। अपसोच तपाई बालुवाटार छिरेको केही दिनमै प्रधानमन्त्रीको ट्विटर खाताको राष्ट्रिय लज्जा हुनेगरि दुरुपयोग भयो । के छ दोषी भेट्नु भो ? भेट्नु भएछ भने जनतालाई सु-सुचित गराई दिनु होला । मैले त तपाईलाई ट्विटर मै कामरेड यो तपाईको छोराछोरीको खेस्रा कापी होईन जे मन लाग्यो त्यो लेख्न, छिटो दोषी पत्ता लगाईयोस पार्टी सह-प्रबक्ता महोदय भनेर तपाईकै खातामा प्रतिक्रिया जनाएको थिए तपाईलाई हेर्ने फुर्सद भए पो त ! अँ हेर्न त आँट पो चाहिन्छ, हराएकाले सक्दैनन, मुटु नै चाहिन्छ।
कामरेड, मेरा कुराहरु सुन्नु पर्छ म भन्दिन तर आज तपाईं सल्लाहकार त्यसैमा पनि प्रेसको भए पछि कम्तिमा नेताहरुलाई लडाउने एताको कुरा उता उताको कुरा एता लाउने होइन होला । बरु नेताहरु बिचका तिक्तताहरुलाई कम गर्न मद्यमार्गी भुमिका खेल्ने होला। आज काङ्ग्रेस नेताहरु जो डलरबादी छन उनिहरु, व्यापारी, बिदेशी एजेन्ट सङ भेट्ने समय तपाईहरु सङ प्रसस्त छ। तिनिहरू तपाईहरुको गुरु, विद्वान भएका छन तर जीवन भरी कम्युनिस्ट भएर साच्चिकैका स्वाभिमानी विद्वानहरुलाई भेट्ने समय छैन र चाहाना पनि देखिन्न। सरकारलाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भन्नेमा नेता, बुद्धिजीवी तथा जनतासंग अन्तक्रिया छलफल गरेको कहिल्यै देखिएन बरु यो अत्यन्तै उर्वर समय हो यो समयलाई सदुपयोग गरेर जस्सरी भएपनी सफल हुनै पर्छ भन्नेहरुका बिरूद्ध तन, मन र सरकारी धन प्रयोग गरेको देख्दा म जस्ता हजारौ हजार कार्यकर्ताहरुको आत्मा जलेको छ ।
एउटा अन्तरवार्तामा त कामरेडले यति पनि भन्नू भएको छ कि पार्टी एकता गर्ने काम त दुई अध्यक्षको हो अरुहरुको त रोटि सेक्ने काम हो भनेर। कामरेड, तपाईले डल्लुमा रोटि सेक्दै गर्दा अगेनोमा तताउन राखेको घिउ चोरेर खएको भन्ने कुरा टाढा को होईन केवल ८/१० बर्ष मात्र भो। अनि बालुवाटार आएपछी पनि रोटि सेक्ने कामपाएकाहरु बिच नै घिउ खाने बिषयमा लुछालुछ भएको कुरा धेरै नेपाली समाचारहरुमा केही दिन अगाडि भाईरल भएको तपाईले पनि देख्नु भएकै होला । कामरेड, घिउ चोरेर खान छाउणाहरुको कट्या परे पछि माउले मिलाएको भन्ने कुरा झन नौलो होइन। यसले त तपाईं टोखाको दलानबाट उडेर बालकोट पुगेको आभास हुन्छ।
नत्र के आजकाल टोखामा पनि रोटि सेक्ने काम मात्र हुन्छ त ? आफ्नो चरित्र अनुसार दुनिया देख्नु हुदैन कामरेड रोटि सेकेको कुरा गर्यो भने कार्यकर्ताहरुलाई लज्जा बोध हुन्छ,कस्ले कस्को भट्टिमा कुन बेला कहाँ गएर रोटि सेकेको छ भन्ने कुराको बहस चालाईयो भने त्यसैले त्यो समय आयसि आफै खुल्नेछन। तपाईलाई एकता भनेको केही पदहरुको भागबन्डा हो भन्ने ला छ होला। कार्यकर्ताले बुझ्ने एकता भनेको मनको एकता, बिचारको एकता हो? त्यो कहा, कस्ले गरेको छ। जिम्मेवारी पाएका, दिईएकाहरुले के कसरी निर्भाहा गरेका छन एकचोटी चिसो पानी पियर आफू भएर सोच्नुस त! अर्को नेताहरुले सरकारलाई असफल बनाउन लागे भनेर पनि त्यसै अन्तवार्तामा कुर्लानु भएछ। एदि तपाईं सल्लाहकार नै हो भने सल्लाहकार जस्तै भएर एकचोटी जीवन भरी काध थापेका मान्छेहरुलाई सोध्ने आट गर्नुस। अरुलाई सोध्न सकेनौ भने क. प्रदिप नेपालका बिचारहरु त पढ्ने आट गर्नुस। मुकुन्द न्यौपानेका कबिता पढ्नुस। दायाल बहादुर शाही लगायत टिमका लागि आफ्नो राजनितिक जीवन दाउमा लगाएका ब्यक्तिहरुका फेसबुक पोस्ट हेर्नुस।
स्वणिम वाग्लेलाई भेट्ने समयमा एकचोटी भएपनी डा. युबराज सङ्ग्रौलाहरुलाई भेट्नुस। बिश्वबिद्धालयका साच्चिकै समयको सहि विश्लेषण गर्न सक्ने विद्वान आदरणिय प्राद्यापक ज्यूहरुलाई भेट्नुस र सोध्नुस। अझै अरुलाई नभेटे पनि हिजो आफ्नो कोठाको भित्तामा जन्मदिने आमाबुवाको तस्बिर हटाएर क. ओलिको तस्बिर सजाउने, बुवाको मुखहेर्ने दिनमा समेत जन्मदिने बुवाको साटो उहाको तस्बिरमा पुजा आजा गर्नेहरु (नबुझेका केही हरुमात्र होइन मै हु भन्नेहरु पनि थिय) तिनिहरु बागबजार तिर प्रसस्तै भेटिन्छ। केहिहरुले बालुवाटारको गाई दुएर दुध खादैछन केही त्यो पहुँचमा छैनन एकचोटि टिनिहरुलाई सोध्नुस, के भित्ताको तस्बिर छदै छ त? के अचेल पनि एकचोटी तस्बिर नहेरेर निन्द्रा पर्दैन? साथै, तपाईं त सह-प्रबक्ता पनि हो, प्रिय् सह-प्रबक्ता एकचोटी सक्छौ भने जीवन एमाले/माओबादी का निन्ती अर्पण गरेका हरुलाई सोध्नुस।
नाकाबन्दिको सामना गर्दा अनुहारमा टाटु खोप्ने, बिच सडकमा तस्बिरमै ढोक्ने, काध थापेर बोक्नेहरुलाई एक पटकलाई भएपनी सोध्नुस। तर यति पनि गर्न मुटु नै चाहिन्छ। यदि मुटु हराएकै हो बने बागबजारमा चियाको चुस्किमा समेत तपाईं र तपाईकाहरुलाई सम्झने, निन्द्रामा समेत बालुवाटार- बालुवाटार भन्नेहरुलाई छातिमा हात राखेर, यो धर्तिको माटो र त्यो पार्टिको झण्डा हातमा लियर भन्न लगाउ के छ स्थिती भनेर र बुझ्नु हुनेछ के छ भनेर। यदि यत्ती पनि गर्ने तागत छैन भने म देश भरिका नेता कार्यकर्ताहरुका र केही बेदेशका प्रतिनिधि मुलक आक्रोशहरु तपाईको Email मा पठाई दिउला तर तपाईंले त्यी आक्रोश सुनेर बेहोस हुन र तिनै नेता कार्यकर्ताहरु माथी गुटको आरोप लगाएर गुटकै तरवारले राजनितिक घाँटी रेटिने छैन भन्ने बिश्वास दिलाउन सक्नु पर्नेछ।
अझ्रै तपाईं भन्नू होला तिनिहरू त हिजो देखिकै बिरोधी हुन । होइन कामरेड म तपाईका माउहरुकोलागि जीवन रेटेकाहरुकै प्रसस्त उदारण पेस गरुला। म पनि त्यहि एक भित्रै पर्न पनि सक्छु? बिश्वास नभए त्रिभुवन बिश्वबिद्धालयको हरेक बिभागहरुका बिध्यार्थिहरुलाई गएर सोध्नुस तपाईं पनि बिध्यार्थी बन्न अन्तिममा भएपनी प्रबेश परिक्षाको नतिजामा तपाईलाई पनि देख्न सकिन्छ। या त अहिलेका मै हु भन्ने चिया गफाडिहरुलाई सोध्नुस जस जसलाई महाधिवेशनदेखि लिएर राजनितीक लडाईमा मैले पनि केही थोपा रगत र केही अन्जुली पसिना पोखेको छु। बिगत १०/१२ बर्ष देखी पार्टिलाई मैले पनि कलिलै उमेरमा लेबि बुझाएको छु। कैयौ मान्छेहरुलाई एमाले बन्न प्रेरित गरेको छु । त्यसैले आज तपाईं जत्तिका डनहरुको पनि डरै नमानी यो लेख्ने मुटु बनाएको छु।
अन्तमा, कामरेड, तपाईलाई त ” यत्ती हो सेरिकी रोपाई यत्ती हो भात खाई” भन्ने पनि लाग्न सक्छ र झन रोपाई नै भाड्न कुलो भाच्न थाल्नुहोला। कृपया त्यस्तो नगरिदिनु होला तपाईंको पो पेट भरिछ होला तर सिङो जनता भोकै छन। अत: आज सम्म जे गर्नु भो त्यो बालुवाटार छिरेको बैँस हो मान्न सकिएला र मानौला पनि तर अझै पनि यस्तै/यस्तै बानी ब्यवहारहरु दोहोर्याई रहनु भएछ भने” राम राम भन्न सकिन्छ, काध थाप्न सकिन्न।” धन्यवाद।
तपाईको अमुल्य समयका लागि धन्यवाद।
हार्दिक अभिवादन सहित। उहीँ तपाईको सुभचिन्तक।
हरिलाल भट्टराई, जर्मनी
धम्कीपछि उत्तर कोरियाद्वारा तीन मिसाइल प्रक्षेपण